Ntuziaka Ojiji | Halllọ Nzukọ Ncheta Ryuko
Enwere mkpọda dị n'akụkụ steepụ n'ọnụ ụzọ, enwere ụlọ mposi na-eme ọtụtụ ihe, enwere mgbazinye oche ndị ngwọrọ, tinyekwa AED.
Dị iche iche ojiji
Akwụpụrụ ego nbanye maka iji dị ka akụkụ nke agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ
Mụ akwụkwọ praịmarị na nke obere na ndị isi ha anaghị akwụ ụgwọ, ụmụ akwụkwọ sekọndrị na ndị isi ha kwetara na ọkara ọnụahịa nke yen 100.
Biko kpọtụrụ anyị ka ị ga-etinye tupu oge eruo.
Free maka ndị mmadụ karịa 65 afọ (akaebe achọrọ)
Ebe ọ bụ na ndị gbara afọ 65 na karịa (asambodo achọrọ) bụ n'efu, ọtụtụ mmadụ na-abịa n'ụlọ ihe ngosi nka maka ezumike ọrụ ụbọchị.N'okwu ahụ, ndị na-ahụ maka nlekọta nwekwara ike ịbanye n'ụlọ ngosi ihe nka n'efu.Biko kpọtụrụ anyị tupu oge eruo.
Na mgbakwunye, anyị na-anabata ndoputa otu
Ego otu (20 mmadụ ma ọ bụ karịa) bụ 160 yen maka ndị okenye. Admission bụ n'efu maka ndị mmadụ karịa 65 afọ site n'inye akwụkwọ asambodo dị iche iche.Na mgbakwunye, n'ihe banyere ndoputa otu, anyị nwere ike ịnye nduzi ubi na nkọwa dị mfe banyere ọrụ maka otu ndị mere ndoputa ahụ, yabụ biko kpọtụrụ anyị tupu oge eruo.